Sayniska La Yaabka Leh Ee Ka Dambeeya Saameynta iyo Qancitaanka | Martech Zone
Waxaan ku hadaaqayey nacaybkayga ku saabsan dawada ugu dambeysa ee sida saameyn ku yeelashada suuq geynta waxaa lagu iibinayaa khadka tooska ah. In kasta oo aan aaminsanahay in saamileyaashu ay leeyihiin wax weyn oo ay gaaraan iyo qaar ka mid ah saameynta, ma aaminsani inay leeyihiin awood wax qancin oo ka madax banaan qodobo kale. Suuqgeynta saameynta waxay wali ubaahantahay istiraatiijiyad dhaafsiisan tuurista tikidhada qaar saameyn kuleh ama dib uheli karto
Sida uu sheegayo Dr. Robert B. Cialdini, oo ah qoraaga Saameyn: Sayniska iyo Tababarka (Qormadii 5aad), Waxaa laga yaabaa inaan wax dul saaran yahay. Falanqeyntiisa waxay ogaatay inay jiraan 6 maamuleyaal caalami ah oo saameyn ku leh kuna qanciya shaqsiyaadka:
Isxilqaan - waajibaadka saaran inaad soo celiso wixii aad ka heshay dadka kale.
Dhibaato - dadku waxay rabaan inbadan oo waxyaalahaas ah kuwa yar.
Authority - dadku waxay raaci doonaan hoggaanka khubaro lagu kalsoonaan karo oo aqoon leh.
Dhanka - lagu hawlgeliyey iyadoo la raadinayo lana weydiinayo ballanqaadyo yaryar oo bilow ah oo la samayn karo.
Laba socod - dadku waxay doorbidaan inay haa ku dhahaan kuwa ay jecel yihiin.
Isku xirka - dadku waxay eegi doonaan ficilada dadka kale si ay u go'aamiyaan tooda.
Tani infographic ka everreach wuxuu muujinayaa mabaadi'da guud ee 6 ee Saamaynta iyo Qancinta:
Halkan waxaa ku yaal wada hadal faahfaahsan oo ku saabsan Saamaynta iyo Qancinta fiidyow muuqaal ah oo ka socda SAAMAYNTA SHAQADA (IAW):
Tags: xujoisku raacsanjoogteyntago'aan qaadashadaDr. Robert B. Cialdinisaamayntasaamaynta shaqadasaameyn ku yeelashada suuq geyntajecelkalsooniPsychologyisu dheelitirnaantaRobert B. Cialdiniyaraanta
Sida Loogu Kaxeeyo Ganacsi Twitterka iyo Tweets-ka La Dhiirrigeliyo
Sep 6, 2014 at 1: 14 AM
Taasi runti waxay ahayd qodob weyn oo ku saabsan sida saamaynta loogu yeelan karo macaamilka oo looga dhaadhiciyo kobaca ganacsiga !!